Abesifazane Ehlobo Abaphefumula Izicathulo Ezivamile Loafers ...
IMens Slippers Moccasins Yamadoda Inqwaba Ethokomele Enolayini nge ...
AmaMoccasin Wenqola Yabesifazane Ethokomele Enentambo nge-Micro suede ...
IDailyShoes Yabesifazane Abakhululekile Abazungelezayo Abazungezile ...
I-Flannel ye-Flannel ethambile efudumele yama-Slippers Men Men ...
Izicathulo Zabesifazane Zishelele Ekukhanyeni Kwe-Comfort Kukhonjiswe Ku ...
Uphayinaphu Fluffy Slippers Wezingane, Opopayi Endlini ...
Ama-Slippers amahle we-Unisex-Kids Cozy Furry
Isitayela Samadoda Sneaker Running Walking Shoes
Ama-Ladies 'Bunny Face Slippers Afudumele ...
Izimbadada Zabesifazane Ezivamile
I-Moccasin Slippers yabesifazane besikhumba
Izicathulo ze-Girls Glitter Flats Ballet
Abesifazane Jersey Casual Shoes Multi Color Slip O ...
Abesifazane Floral Canvas Shoes Low Top Okuvamile Wal ...
Izingane 'Dinosaur Slipper Boots Wezingane ...
Amateku Abesilisa Fashion Lightweight Running Sho ...
I-Men's Genius Leather Sneaker
Izicathulo Zokuhamba Zabesifazane Ehlobo Eziphefumula Ngokuvamile
Abesifazane US6-11 #
*** Icubungula Izinyathelo
Ukuzisika → Ukugoba → Ukuhlala isikhathi eside → Ukuhlola okusemgqeni → Ukuhlolwa kwensimbi → Ukupakisha
** Thatha kalula ukuhambahamba noma ukuhlala ekhaya. I-non-skid hard sole comfy nawe usuku lonke.
Izicathulo ezivamile zabesifazane zibalulekile ekugqokeni nsuku zonke.Isitayela esineTimeless silungele abafundi, abancane, amantombazane namantombazane.Izicathulo zingakuphelezela ukusuka Ebusheni kuye Elegant.
Izicathulo ezimhlophe ze-Canvas zinjengokubukeka okungajwayelekile kokugqoka cishe noma yiluphi uhlobo olujwayelekile lokulingana okufana nama-sundresses, ama-shorts, ama-capris, amabhulukwe, i-jean, ama-skorts, njll.
**** I-imeyili: enquiry@teamland.cn
*** Main Export Izimakethe
Mid East / INingizimu Afrika
EMpumalanga / eNtshonalanga Yurophu
*** Ukupakisha nokuhanjiswa
FOB Port: Shanghai Isikhathi Ukuhola: izinsuku 45-60
Usayizi Wokupakisha: 54 * 32 * 24cm Isisindo seNet: 2.40kg
Amayunithi nge-Export Carton: 12PRS / CTN Isisindo esikhulu: 2.90kg
*** Inkokhelo & Delivery
Indlela Yokukhokha: 30% idiphozi kusengaphambili kanye nebhalansi emele ukuthunyelwa
Imininingwane Yokulethwa: Izinsuku ezingama-60 ngemuva kokuvunyelwa kwemininingwane
*** Inzuzo Yokuncintisana Ephambili
Ama-oda Amancane Amukelwe
Isilayidi Sabesifazane Abanozwane Abancane Nentuthuzelo Kuzicathulo Zama-Ballet Flats
Ukudweba → Isikhunta → Ukusika → Ukuthunga → Ukuhlola Okusemgqeni → Ukuhlola Insimbi → Ukupakisha
I-Outlet & lightweight outsole ihlinzeka ngokungahambisani nokusheleleka kwangaphakathi nangaphandle.Idizayini ephefumulayo isusa umswakama ngokushesha ngemuva kohambo olude losuku. Izici zemininingwane ekhonjiwe ingabhanqa kahle nazo zonke izingubo.
Ulwelwesi Oluthambile Nolunesikhumba: Ulwelwesi olunjengamafu luphonsa ukuqabula kwezinzwane zabo ezincane, kuthumele induduzo efana nomcamelo lapho bezishelela.
Isikhunta se-foam yenkumbulo ephakeme kakhulu ezinyaweni zakho futhi sigcina isimo. Ithambile futhi Inethezekile.
indwangu-futhi-zokwenziwa. Isipho esihle se-Baptism, i-Halloween, isipho sikaKhisimusi noma ukugqoka nje.
Ifulethi le-ballet yakudala ene-Premium Latex Cushioned Foot-Bed, ye-Ultimate Comfort.
Usayizi Wokupakisha: 39 * 34 * 30cm Isisindo seNet: 2.1kg
Amayunithi nge-Export Carton: 12PRS / CTN Isisindo esikhulu: 2.6kg
Amantombazane ama-Cute Fleece Star Slippers Warm Household Anti-Slip Endlini Home Slippers
Intombazane UK6-13 #
I-lip On Design: -blend engenhla ngomklamo wepulasitiki owenziwe ngezinkanyezi unikeza ingane yakho amasiliphu endlu ahlukile. Ukushelela okulula ekwakhiweni, okwenza kube lula ukugqoka. Ngemuva kwalokho bazofaka imvilophu ezingeni kancane futhi bangalokothi bashelele.
Umshini Wokugeza. Isipho esihle se-Baptism, i-Halloween, isipho sikaKhisimusi noma ukugqoka nje.
Ukupakisha Usayizi: 45 * 32 * 24cm Isisindo seNet: 2.5kg
Amayunithi nge-Export Carton: 12PRS / CTN Isisindo esikhulu: 3.1kg
I-Womens Indoor Outdoor Basic Memory Foam Moccasin Slipper W / Faux Fur Collar
Okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuPinki, Okumpunga, Okunsundu, Okushokoledi
Abesifazane’I-US6-11M & W
Ukudweba → Isikhunta → Ukusika → Ukuthunga → Ukuhlala Njalo → Usimende → Ukubumba → Ukuhlolwa Okusemgqeni → Ukuhlolwa Kwensimbi → Ukupakisha
** Isikhumba se-Suede. I-Insole: Umbhede wezinyawo owenziwe ngomuntu owenziwe ngomuntu wengulube kukwenza uzizwe Ukhululekile, u-Hygroscopic kanye noMjuluko Ukhulula.
** Ngaphandle kolwelwesi loboya obuthambile obuthambile, kunento eyodwa ebaluleke kakhulu eyenza lezi zilayidi ezifudumele zikhululeke. Ngokuqondile, ama-slippers ethu e-moccasin ane-foam foam insole ehambelana nonyawo lwakho futhi enikeza induduzo ephelele.
Ama-slippers enkumbulo amagobongo angena kubo bonke abantu besifazane abadala base-US (6-11) kanye nemibala emi-5 emangalisayo, ukuze ukwazi ukukhetha okufana kakhulu nesitayela sakho, ubuntu bakho kanye nengubo yakho oyithandayo noma ngisho namaphijama! Imibala etholakalayo ikhonaOkuluhlaza okwesibhakabhaka, okuPinki, Okumpunga, Okunsundu, Okushokoledi.
** I-imeyili: enquiry@teamland.cn
Usayizi Wokupakisha: 61 * 45 * 35cm Isisindo seNet: 5.5kg
Amayunithi nge-Export Carton: 12PRS / CTN Isisindo esikhulu: 6.50kg
Abafana Namantombazane Endlini Yokushibilika I-Cute Dinosaur Cartoon Soft Anti-Slip Winter Shoes
Abafana namantombazane US1-6 #
IZINTO ZOKUTHOLA: Izinto ezilula nezithambile zenza ama-slippers kube lula ukugoqeka nokubeka, okuvumela ingane yakho ukuthi ihambe, ilale, futhi idlale ngenkathi izizwa ithokomele usuku lonke.
** NGAPHANDLE OKUTHANDEKAYO: Azikho izingane noma ezisacathula ezingavimbela amehlo azo kulezi zilayidi ezinhle ezenziwe ngopopayi. Ziyathandeka ngokwanele ukuvusa ukoma kwazo ukuze zibe neyodwa, kulula ukuzibhangqa nanoma yikuphi ukugqoka noma amasudi futhi kuhle kakhulu ekusetshenzisweni kwangaphakathi nangaphandle.
** WONKE UMNYANGO WONYAKA: Lezi slippers zinikeza ingane yakho imfudumalo ngezikhathi zonyaka ezibandayo nokufakwa ngokwanele ezinsukwini ezinelanga, okuyenza ibe yisimo sezulu esisheshayo sonke.
Ama-Moccasions Amadoda ane-Memory Foam Slippers Yamadoda Ngaphandle Kwangaphandle
Abesilisa’I-US8-13M & W
I-Slippers Men Ultimate Comfort: I-Interior Soft Lining izokunikeza ukulingana okuhle ukuze ikhulise futhi igcine izinyawo zakho zithokomele, zikhululekile futhi zifudumele.
Ama-Slippers for Men Indoor Outdoor Wear: Amathe wenjoloba ahlala isikhathi eside futhi ashibilika aqinisekisa izinyathelo zokuzethemba ezizungeze izindawo zangaphakathi nangaphandle, nazo zingagqokwa njengezicathulo zokushayela.
Ama-slippers ama-faux fur mens house slippers amadoda afakwe uboya obufakelwe ukufudumala okukhulu nokunethezeka. I-foam moccasin slippers memory foam ekwenza ukujabulele ukugqoka okunethezekile, uzizwe ushelela kalula noma kunini lapho ufuna izinyawo zakho zikhululeke; Lapho ufika ekhaya, shelela kulawa ma-mins moccasin slippers, khululeka ngokuphelele ezinyaweni zakho ngemuva kosuku olude lokushayela nokusebenza.
Usayizi Wokupakisha: 57 * 47 * 35cm Isisindo se-Net: 4.80kg
Amayunithi nge-Export Carton: 12PRS / CTN Isisindo esikhulu: 5.90kg
Imemori Yabantu Abakhululekile Yenkumbulo Yesikhumba Slip Slip
Umkhumbi Wezempi, Mpunga
Okwabesilisa US8-13 #
** I-Super soft coral flece fabric collocation ukhwaliti woboya obuphezulu. Izicathulo zikunikeza izendlalelo eziphindwe kabili zokuvikela futhi indwangu engenawo amanzi akulula ukulahlekelwa yizinwele.
Izinto ezilula nezithambile zenza ama-slippers kube lula ukugoqeka nokubeka. Ungazithatha lapho usohambweni, e-spa, ehhovisi noma ehhotela. Nethezeka izinyawo zakho noma nini nanoma kuphi.
** Islip non-sole yesinyathelo ngaphandle sokuthatha iphepha lasekuseni, hamba inja, unisele i-flowerbed njalonjalo. Umshini ogezwayo wenza kube lula ukunakekelwa.
Amayunithi nge-Export Carton: 12PRS / CTN Isisindo esikhulu: 6.2kg
Ama-Mens Slippers Moccasins Wabantu Abathandayo Inqwaba Egcwele Imicrosuede Upper Indoor Outdoor On House Shoes
I-QUALITY SUEDE - Ama-slippers wesitayela se-Moccasin aqoshwe kusuka ku-suede yangempela futhi atholakala ngezinketho ezahlukahlukene zombala.
I-PADDED INSOLES - Ifaka ama-insoles amancane anoboya agcwele uboya obufekethisiwe obuthambile, okukunikeza umuzwa okhululekile kakhulu.
Ama-moccasin ajwayelekile wezicathulo zasekamelweni lasendlini, okuqinile futhi okushibilika okungangeni manzi kwe-TPR kuphela kungakuvikela ekushibilikeni noma ekushibilikeni.
Isipho esihle semindeni yakho nabangane bazo zonke izinhlobo zemikhosi ekunikezeni izinyawo zabo ezikhathele ukuphumula okufanelekile.
Usayizi Wokupakisha: 57 * 45 * 35cm Isisindo seNet: 4.80kg
Amayunithi nge-Export Carton: 12PRS / CTN Isisindo esikhulu: 5.9kg
Islip Abesifazane Nabesilisa Kuziteki Ezingasindi Ezijwayelekile
Isitayela Solwazi Esiyisisekelo: Cha: 19-024 Umsuka: I-China Ephezulu: I-Synthetic Lining: I-Mesh Sock: I-Mesh Sole: Umbala we-EVA: Okumpunga, Okumnyama, Okuphinki, Okuphephuli, Osayizi Abaluhlaza okwesibhakabhaka: Abesifazane base-US5-9 # Abesilisa be-US8-12 # Isikhathi Sokuhola: Izinsuku ezingama-45-60 MOQ: Ukupakisha okungu-1000PRS: I-Polybag FOB Port: Izinyathelo Zokucubungula ZaseShanghai → Isikhunta → Ukusika → Ukuthunga → Okuhlala Njalo → Ukujova → Ukuhlola Okusemgqeni → Ukuhlolwa Kwensimbi → Izicelo Zokupakisha Lawa mateki afanela ama-occasi ahlukahlukene ...
Iziteki Zokuphefumula Zabesifazane Eziphefumulekayo
Isitayela Solwazi Esiyisisekelo: Inombolo engu-18-102: I-China Phezulu: I-Fly Knitted Lining: I-Mesh Sock: I-PU Sole: Umbala we-EVA: Umkhumbi Wezempi, Beige, Mpunga, Luhlaza okwesibhakabhaka, Mhlophe, Osayizi Abaphinki: Abesifazane be-US5-9 # Isikhathi Sokuhola: 45- Izinsuku ezingama-60 i-MOQ: Ukupakisha okungu-1000PRS: I-Polybag FOB Port: I-Shanghai Icubungula Izinyathelo Zokudweba → Isikhunta → Ukusika → Ukuthunga → Okuhlala Njalo → Ukujova → Ukuhlola Okusemgqeni → Ukuhlolwa Kwensimbi → Izicelo Zokupakisha Lezi ziteki zilingana ngaphakathi nangaphandle, ukukhetha okuhle ukugijima, ukuhamba njll. Ukuphefumula kahle ...
AmaMoccasin Wenqola Yabesifazane Ethokomele Emalayishwe nge-Micro suede Upper Indoor Outdoor Slip On Shoes House
UKUTHUTHUKA - Izilayidi ezithokomele zikulungele ukusetshenziswa kwasendlini futhi i-TPR outsole ivumela ukukhanya ngaphandle.
Usayizi Wokupakisha: 61 * 45 * 35cm Isisindo seNet: 5.50kg
Amayunithi nge-Export Carton: 12PRS / CTN Isisindo esikhulu: 6.20kg
Isitayela Solwazi Esiyisisekelo: Inombolo ye-TLDL-01: I-China Ephezulu: I-Lining Lining: I-Mesh Sock: I-Mesh Sole: Umbala We-Rubber: Osayizi Abamnyama: I-Men's US8-13 # Isikhathi Sokuhola: Izinsuku ezingama-45-60 MOQ: Ukupakisha kwe-1000PRS: I-Polybag FOB Port: Izinyathelo Zokucubungula ZaseShanghai → Isikhunta → Ukusika → Ukuthunga → Okuhlala Njalo → Ukujova → Ukuhlola Okusemgqeni → Ukuhlolwa Kwensimbi → Ukufaka Izicelo Lawa mateki afaka isikhumba esithambile esiphezulu esisekelayo futhi esinethezekile. Isikhumba Esinakekelwa Ngokulula esinolwelwesi olunobungane besikhumba ...
& BE usesikhathini
Ikheli:2805, 28th Fl. IJuhao Tower, Isigaba A, International Trade Plaza, No. 2 Hongcheng Road, Nanchang, Jiangxi, China Pc330002
Isixhumanisi esenziwe eChina:Chofoza lapha ukuze wenze eChina
Isixhumanisi Sesitolo sase-AMAZON: Chofoza lapha esitolo se-AMAZON US
Isixhumanisi Sesitolo se-AMAZON CA: Chofoza lapha esitolo se-AMAZON CA